Guuldaro soo wajahday orodyahanadda Soomaalidda | Gedoonline
Guuldaro soo wajahday orodyahanadda Soomaalidda	Added by Editor on August 4, 2012.Saved under Latest News	LONDON(GMN)-Soomaalida ku nool dalka iyo dibadiisa siyaabo kala duwan ugu hadlay guul daradii soo wajahday orodyahanada Soomaaliyeed ee ka qeyb galayey tartanka Oradka ee Olyp-kada oo ka dhacaya magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Dadka qaarkii ayaa aad ugu dhaliilay guddigga olimpik-ada Soomaaliyeed aysan tababar ku filan siinin ka hor inta aysan ka qeyb gelin tartanta halka kuwa kalena ay qabaan inay dhacday farsamo xumo.
Labada Cayaaryahan ee Zamzam iyo Maxamed ayaa ku guul dareystay cayaarihii oradada ee shalay ka dhacay magaalada London.
Orodyahanadda Soomaalidda ayaa guul daro soo wajahday ka dib markii ay gaari waayeen diilimaha guusha.
Orodyahanadda Soomaalidda oo Maanta ordaya
AMISOM oo Mushaar La’aan soo wajahday
Dagaal cusub oo Dowlada wajahday.
Manchester United oo mar kale guuldaro dhabarka loo saaray.
Dhibaatadda Soomaalidda Koonfur Afrika oo loo istaagayo